Kufufusa umbango esizweni sabaThethwa - Ilanga News
Home Izindaba Kufufusa umbango esizweni sabaThethwa
Kufufusa umbango esizweni sabaThethwa
Abendlu kaDingiswayo bafuna esobukhosi
KUFUFUSA ukungaboni ngaso linye ebukhosini bakwaMthethwa, eMpangeni, emu-va kokuba abendlu yeNkosi uDingiswayo kaJobe bephumele obala bathi mazibuye emasisweni, isihlalo sabo sibuyele endlini yabo.
Lezi zindaba zethuse abaningi ngesikhathi uMnu Sipho Mthethwa eziveza kade emukela indebe kwi Zihlabani Awards, eMfolozi Casino, eMpangeni, ngoLwesihlanu, lapho bekuhlonishwa khona iqhaza leNkosi uDingiswayo ngokuba nesandla ekukhuliseni iSilo uShaka, iLembe eleqa amany’ amaLembe ngokukhalipha.
Kulo mcimbi kubonakale iNkosi Mbusowabathethwa Mthethwa ingena iyohlala etafuleni lezintombi zangakubo ebezihlobe ngezikibha ezibhalwe ukuthi “Abathethwa”. Kube sekufika ithuba lokubizwa kwegama leNkosi uDingiswayo, lasukuma ithimba labaThethwa ebeliholwa nguye uMnu Mthethwa, wemukela indebe kuSolwazi Musa Xulu, kwafundwa umlando kaDingiswayo.
INkosi Mthethwa isale yodwa etafuleni, kayiyanga ukuyokwemukela nabakubo.
Enkulumeni yakhe uMnu Mthethwa (Sipho), ubonge uSolwazi Xulu ngokucabanga ukuhlonipha inkosi yabo emuva kweminyaka engaphezu kwewu-200 yakhothama. Uthe sesifikile isikhathi sokuba umlando wabaThethwa uqondiswe wathi: “ILembe lakhuliswa laqeqeshwa yiNkosi uDingiswayo eyabe inobubele ngisho ilwe yanqoba amakhosi, yayingawabulali.
UNandi (unina kaShaka) wahlala neLembe laze lakhula, kwathi sekufanele liyothatha ubukhosi balo kwaZulu, (uDingiswayo) walikhipha nebutho elaliholwa yinduna yakhe enkulu, uNgomane, ba-nqoba izizwe.
Kusamele iNdlunkulu kaZulu ibuye izolanda iLembe ngokwesiko uma izinto sezihamba kahle,” kusho yena.
ILANGA libe selimbuza emuva kwalo mcimbi ukuthi uchaza ukuthini uma ethi kumele kulungi-swe umlando wobukhosi babaThethwa ekubeni ikhona inkosi esesihlalweni njengamanje, wathi: “Kasikufihli ukuthi sifisa ukuba ubukhosi bubuyele endlini kaDingiswayo ngoba iNkosi uShaka yabeka uMbiya, owayengesiyo owendlu kaDingiswayo, kusukela lapho amakhosi ale ndlu alandelana kusukela kuMbiya kuze kufike kulena ekhona manje.
“Sesilufakile lolu daba eMnyangweni wezokuBusa nokuBambisana nezoMdabu, yingakho nje kusamisiwe ukugcotshwa kwenkosi ekhona. Bona bewumndeni weNkosi uNtemba, bakhombe yona ukuba ihole isizwe, thina bakaDingiswayo sithi mazibuye emasisweni,” kuchaza uMnu Mthethwa.
Ibuzwa inkosi yabaThethwa ngokushiwo emcimbini nokungabi yingxenye yethimba ebeliyokwemukela indebe kaDingiswayo, ithe: “Bengingamenyiwe, ngizwe ngomuntu mumbe wathi nakhu ebona abaThethwa besemcimbini ngiyazi yini ngawo, ngathi ake ngiye ngiyobona, nebala ngazibonela ngakha umkhanya ngazithulela. Ngiku-zwile konke akushilo (uMnu Mthethwa), umbuzo wami uthi sonke lesi sikhathi amakhosi ale ndlu engena ephuma, bebe-thuleleni.
“Nakubaba ke (iNkosi uNtemba), abaphile naye bebelinde aze akhothame yini bese bekhuluma? Uma befuna into yabo mabayifune kahle. Into engiyifunayo nje wukuba kube nokuthula esizweni.”
Previous articleKubuya abamqoka kwiChiefs
Next articleuzofihlwa e-cramond “obulewe yiphoyisa”